Ololihii ugu dambeeyay ee musharaxiinta u taagan madaxtinimada maamulka Galmudug oo ka socda Cadaado – Radio Muqdisho
Ololihii ugu dambeeyay ee musharaxiinta u taagan madaxtinimada maamulka Galmudug oo ka socda Cadaado
Magaalada Cadaado waxaa ka socda ololihii ugu dambeeyay ee musharaxiinta xilka madaxtinimada maamulka Galnudug ay cod uga raasanayaan xildhibaannada baarlamanka maamulkaasi.
Iyadoo shalay baarlmanka maamulkaasi uu dhageystay khudbadaha Lixda musharax ee isugu soo hartay tartanka madaxtinimada maamulka Galmudug, ayaa haddana maanta oo jimca ah waxa ay musharaxiintu wadaan ololihii ugu dambeeyay oo ay codad uga raadsanayaan xildhibaanada baarlamanka maamulka Galmudug maadaama beri ay dhaceyso doorashada madaxweynihii ugu horreeyay ee uu yeesho maamulkaasi.
Musharaxiinta dhexdooda ayaa la sheegay iney wadaan galaangal iyo dacaayado ku wajahan sidii ay codadka xildhibaannada u heli lahaayeen, halka qaar ka mid ah musharaxiintu ay usocdaan wadahadallo ay ku doonayaan iney codadka isugu biiriyaan.
Magaalada Cadaado maanta waxaa laga dareemaya saxmad iyo buuq farabadan iyadoo gaadiid codbaahiyayaal lagu soo xiray oo ay adeegsanayaan qaar ka mid ah musharaxiinta ay dhex wareegayaan magaalada.
Si kastaba ha ahaatee maalinta beri ah ayaa lagu wadaa in doorashada madaxtinimada maamulka Galmudug ay ka dhacdo magaalada Cadaado, waxaana u taagan tartankaasi ilaa Lix musharax.
Tartamayaasha degmada Baydhabo oo caawa u soo gudbay wareegga saddexaad ee tartanka “SAWIRRO”
Markab siday in ka badan 3500 oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo soo gaaray Boosaaso